Maamulaha dookha cusub ee Xfce | Laga soo bilaabo Linux
Wax yar ayaa ka haray sii deynta nooca 4.10 waxaa qoray Xfce iyo liiska horumariyeyaasha, fikradaha ayaa sii socda, in kastoo aysan u muuqan wax cusub, waxay ku siin doonaan khibrad wanaagsan adeegsiga tan Deegaanka Desktop..
Sawirka bilaabaya qoraalkan ayaa ah nooca cusub ee Maamulaha dookha de Xfce, taas oo ina xusuusinaysa (in kastoo si ka fudud) midka lagu daro KDE y Gnome 3, halka xulashooyinka ay ku qoran yihiin qaybo. Hase yeeshe, wax ku habboon in la muujiyo, si kastaba ha noqotee, astaamaha cusub ee xulashooyinka qaarkood ee lagu arki karo shaashadda ayaa dareenkeyga qabanaya:
Ku saabsan naftayda(Aniga igu saabsan): Waa wax taas Xfce kama laha asal ahaan, markaa waxay noqon laheyd mid xiiso leh in la ogaado haddii ay tahay shaqeyn cusub ama codsi dhinac saddexaad ah.
HUBINTA(AQOONSI): Waxay noqon doontaa wax la mid ah Furaha Master de Gnome ama KDEWallet de KDE? Ama wax la xidhiidha marin u helka isticmaalaha?
Dab-damis: Waxay noqon doontaa interface ka mid ah iptables ama codsi kale oo kale sida GUFW?
Ma aqaano haddii astaamahaas runtii lagu dhejiyay Random si ay u qabtaan ama ay yihiin fursado cusub oo aan ku heli doonno Xfce, laakiin shakigu wuu i dilayaa 😀 maxaad u malayn?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Maamulaha dookha cusub ee Xfce
Waxaan isticmaalayay xfce 3 qiyaastii 4.8 bilood aadna waan u arkaa sifiican oo dhameystiran, marwalba waxaan isticmaalaa gnome laakiin markaan arko wadada ay ku socoto waxaan go'aansaday inaan isku dayo xfce iminkana igama niyad jabin. Wanaagsan jawiga desktop-kan
Waxaan jeclaan lahaa inay lahaato mashiinka raadinta ee KDE-style.
Si fudud u qaado elav, aan si dulqaad leh ugu sugno waxyaabaha layaabka leh ee uu XFCE 4.10 inoo keeni doono, wax yar ayaa hadhay.
Waan ka helay sida ay tahay, mid fudud oo fudud.
Sax ayaan kuu soo diray emayl, ma ku soo gaadhay? 🙂
kaliya Janaayo 7
Mid kale ayaan kuu soo diray 🙂
Iimaylka aad gelisay faallooyinka.
XFCE si tartiib tartiib ah ayey marba marka ka dambeysa u sii badineysaa beddel aad u daran. Waxaan rajeynayaa sii deyntan cusub =)
Waxa aan ka baqayo oo aan ka walwalayo ayaa ah in si ka daran oo "daran" loo noqdo oo loo adeegsado Saaxiibtinimo badan, waxay waayaan waxqabad, waxqabad.
Iyadoo aan lahayn ereyo badan oo dheeri ah: XFCE RULZZZZ !!! salaan iyo mahadsanid shaqadaada !!!
Waxaan sugayaa nooca cusub !!!
Waxaan tirinayaa maalmaha ilaa inta la soo saarayo nooca cusub. Gaar ahaan maadaama ay jiraan "buzz" badan oo ku saabsan waxa cusub ee ay soo kordhin doonto oo ay jiraan kuwa badan oo waaweyn ... haddii ugu dambeyn la fuliyo.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, wixii horumar ah ee cusub waa la soo dhaweynayaa Waxaan inbadan isticmaalayay XFCE waana ku faraxsanahay inaan haajiray. 😉